Wararkii ugu danbeeyay suuqa kala iibsiga Iyo Waxyaabihii Ay Wargaysyada Ingiriisku Ka Qoreen. - Gool24.Net
Wararkii ugu danbeeyay suuqa kala iibsiga Iyo Waxyaabihii Ay Wargaysyada Ingiriisku Ka Qoreen.
May 21, 2019 Mahamoud Batalaale
Wararkii ugu danbeeyay ee suuqa kala iibsiga ciyaartoyda iyo xidigaha lakala doonayo.
Suuqa kala iibsiga ciyaartoyda ee Premier league ayaa haddaba furan waxayna kooxuhu samayn karaan saxiixyo iyada oo si rasmi ah loo diwaan galin doono marka la soo gaadho July 1.
Kooxaha Premier league ayaa haddaba suuqa ugu jira ciyaartoyda ay kooxahooda ku soo xoojin karaan waxaana jira ciyaartoy badan oo ay warbaahintu ka hadlayaan in lala kala wareegi doono.
Haddaba shabakada Gool24 ayaa halan idiin ku soo koobtay wararkii ugu danbeeyay iyo waxyaabihii ay wargaysyada Ingiriisku ka qoreen xidigaha kala doonayo.
Qodobada Suuqa Kala Iibsiga Ee Wargayska Daily Mail
Chelsea ayaa Eden Hazard u ogolaan doonta in uu ku biiro Real Madrid si ay iskugu dheeli tirto xisaabta bugaagta kooxdeeda oo ay ugu hogaansan to sharciga dhaqaale wanaaga Yurub ee FFP.
Manchester City ayaa wada hadal kula jirta kooxda reer Belgium ee Anderlecht waxayna City doonaysaa in mar haddii uu Vincent Kompany ciyaartyo iyo tababare kooxdan ka noqday in ay xidigaha da’yartooda amaah ugu diri karaan.
Manchester United ayaa isku diyaarinaysa in ay bixiso lacagta lagu burburin karo heshiiska da’yarka kooxda Benfica ee Joao Felix kaas oo qandaraaskiisa lagu burburin karo £105 milyan gini oo ah lacagta ay United bixinayso.
Maurizio Sarri ayaa si adag ugu jira liiska kooban ee tababarayaasha u sharaxan in ay Juventus ka badalaan Massimiliano Allegri iyada oo Chelsea ayna ka hor joogsan doonin in uu baxo.
Paris Saint-Germain ayaa isku diyaarinaysa in ay hal xili ciyaareed sugto David De Gea si uu u soo dhamaysto heshiiskiisa Man United oo ay si xor ah ugula wareegi karaan.
Difaaca Manchester City ee Benjamin Mendy ayaa kansalay qorshihii fasixii uu xagaaga ku bixi lahaa si uu uga soo kabsato dhaawaca waqtiga dheer soo taagnaa ee uu xiliyada badan ku maqnaa iyada oo taasi Guardiola ka caawin karta in aanu suuqa u galin difaac bidix.
Qodobada Suuqa kala iibsiga ee Wargayska The Sun
Liverpool ayaa Arsneal kula tartamaysa xidiga garabka uga ciyaara kooxda Bournemouth ee Ryan Fraser kaas oo heshiiskiisa ka hadhsan yahay hal sano oo kaliyi.
Xidiga garabka ee Manchester City ee Jack Harrison ayay £20 milyan gini ku doonaysaa kooxda heerka labaad ee Leeds United laakiin City ayaa lacag ka badan ku doonaysa.
Kooxaha Premier League ee Everton iyo Wolves ayaa ku tartamaya xidiga kooxda Benfica ee Andre Almeida.
Cristiano Ronaldo ayaan doonayn in kooxdiisa Juventus ay dib u soo ceshato Antonio Conte.
Qodobada Suuqa Kala Iibsiga Ee Wargayska Daily Mirror
Bayern Munich ayaa aaminsan in ay xagaagan awoodi doonaan in ay Man City kala soo wareegaan xidiga garabka ee Leroy Sane si uu badal ugu noqdo xidiga baxaya ee Arjen Robben iyo Franck Ribery.
Tottenham ayaa si lacag la’aan ah ku waayi doonta Fernando Llorente kaas oo diyaar u ah in uu bilaash ku baxo xataa haddii uu Spurs ka caawiyo ku guulaysiga koobka Champions League wuxuuna diiday in uu heshiis cusub saxiixo.
Wararka Suuqa kala iibsiga ciayartoyda
Wararka Suuqa kala iibsiga ciyaartoy ee kale;
Manchester United ayaa dalbadan doonta 160 milyan yuro haddii Pual Pogba oo 26 sano jir ahi uu kooxdeeda ka baxo waxaana doonaysa Real Madrid. (Daily Star)
Harry Maguire oo 26 sano jir ah ayaa ka mid ah difaacyada dhexe ee ay Man City u tixgalinayso in ay noqdaan badalka Vincent Kompany oo la shaaciyay in uu kooxda ka baxay. (Sky Sports)
Tababarihii hore ee Chelsea ee Antonio Conte ayaa heshiis la gaadhay kooxda Inter Milan isaga oo noqon doona macalinka cusub ee Inter inta xagaagan lagu jiro. (Guardian).
Arsenal ayaa dalab u dirtay kooxda Valencia oo ay ka doonayaan goolhayaha reer Brazil ee Norberto Murara oo 29 sano jir ah kaas oo ay wakiiladiisa la xaajoodeen. (Star)
Chelsea ayaa la sugayaa in ay si rasmi ah ugu dhawaaqdo in Olivier Giroud oo 32 sano jir ahi uu ogolaaday in uu kooxda sii joogo sanad kale.(London Evening Standard)
Marko Grujic oo 23 sano jir ah ayaa Liverpool amaah kaga sii maqnaan kara iyada oo macalinka Hertha Berlin ee Michael Preetz uu wada hadal la yeeshay Jurgen Klopp si uu sanad kale amaah ugu sii haysto Grujic. (Liverpool Echo)